Hihaona sy hanambady lehilahy Breziliana ho an'ny fifandraisana matotra soso-kevitra ho an'ny fanambadiana amin'ny hafa firenena
Hihaona sy hanambady lehilahy Breziliana ho an’ny fifandraisana matotra soso-kevitra ho an’ny fanambadiana amin’ny hafa firenena
Raha nihaona tamin’ny olona avy any Brezila, sy ny momba ity firenena ity fantatro fotsiny avy ao amerika latina tantaram-pitiavana andian-dahatsoratra, tonga ny fotoana mba mitsoraka any an-lalina kokoa ny fianarana ny fiteny portiogey sy hahafantatra ny fiavaham-pirenena Breziliana. Ao Brezila ny finoana Katôlika, ary ny mariazy mifangaro dia tsy vitsy. Noho izany, ao amin’ny Breziliana ny fianakaviana, vady Breziliana nitsena azy amin-katsaram-panahy sy ny miroborobo ny fampandrosoana ny fifandraisana dia miankina amin’ny azy. Izany dia ela ary ny tantaram-pitiavana, fiarahana ny vehivavy sy ny Prim sy araka ny tokony ho lanonana, ny ampakarina, ny andraikitra sy ny fampakaram-bady. Ny fianakaviana eto dia ny matanjaka, na izany aza, ireo vehivavy sy ny lehilahy andraikitra tanteraka ny hisaraka, ka aza manantena fa ny vadiko dia hanampy ny manodidina ny trano sy ny miara-mandeha aminao miantsena. Tsy zoviana amin’ny fianakaviana, misy telo na mihoatra ny ankizy, fa hanome ny zanany ny kalitaon’ny fanabeazana tsy afaka manao ny zava-drehetra, ny ray aman-dreny. Nanaiky hanambady ny Breziliana tsy handratra aloha hahitana izay ampahany amin’ny fiaraha-monina izy an’ny. Amin’ny eo ivelany dia nanan-karena firenena lehibe isan-jaton’ny ny mahantra, ary tsy nampiasa ny olona izy, dia honina mahantra ny faritra — ny faritra iva sy ny foraged heloka bevava. Noho izany, dia zava-dehibe ho anao mba hahitana ny fahaiza-manao ara-bola ny lahy sy ny toeram-ponenana. Alohan’ny handraisana fanapahan-kevitra ny hanambady lehilahy Breziliana, fa ho tsara ny mahafantatra izay misy mponina ny indostria tanàna mahazo be vola bebe kokoa noho ny mponina. Na dia misy manan-karena ny tantsaha sy ny tompon-tany lehibe sasantsasany. Breziliana mandany ny vola tao amin’ny trano sy ny fandaminana, eo amin’ny fiara, izay raha tsy nisy izany dia tsy afaka manao, ny fikarakarana momba ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy, vonona ny hividy akanjo sy firavaka. Sy ny lehilahy ny fitiavana hanome ho an’ny ny fety ny safidy ny firavaka. Brezila no iray tsara tarehy sy tsy manam-paharoa firenena manankarena biby sy ny tena madio mangalahala ny ala. Ny mampiavaka ireo zavatra roa — ny Samba (dihy sekoly amin’ny isan-tanàna) sy ny baolina kitra (tena fitiavana, ary tsy ny lehilahy ihany). Eto dia ny fahavaratra ny taona rehetra manodidina, ka ny taona manodidina ny ala mikisaka amin’ny bibilava, hala sy ny zavaboary hafa tsy mahazatra antsika, izay matetika hiakatra ho any an-trano ny olona. Breziliana mahay mitambatra voajanahary liveliness sy looseness amin’ny Puritanism. Vonona izy ireo ny haka vady Breziliana vady, fa tsy maika ny hanambady lehilahy Breziliana, mbola tsy mahafantatra azy.
Nihaona tamin’ny Aterineto Breziliana tamin’ny volana febroary. Miresaka amin’ny Skype, ary izy manome ahy ny hanambady azy. Velona izy ao Sinop ao amin’ny fanjakana ny Tsihy lehibe. Ny mpianatra na dia efa telo-polo taona. Mianatra mba ho landscape designer. Izy mafy te ahy mba handeha any aminy any Brezila, mandresy lahatra fa tsy manana fotoana mba handeha ho ahy. Ary maniry aho mba ho tonga azo atao. Fa miahiahy aho-inona no maika isika samy mahafantatra sy maka fa mety tsy afaka tampoka izany karazana ratsy fanahy. Ao Okraina any amin’ny tany izay velona koa aho, dia ny olana lehibe ny ralehilahy mpampakatra araka ny zoma dia ny zava-mahadomelina na matevina an-tsaina. Zazavavy tia sy ny zavatra tokony hatao. Na dia ny tanàna manana olana amin’ny suitors, aza manao fihetsika tsy voahevitra. Mazava ho azy, dia mila mihaino ny tenanao, tsy ho very mailo. Raha manana ahiahy, dia misy ny antony. Mandany kely ny fanadihadiana. Ao amin’ny fikarohana sy ny karazana ao amin’ny fikarohana bar ny anarany, ny fanampin’anarany sy ny alternately na dia ny tahirin-kevitra izay manana ny tanàna, ny Oniversite, sy ny maro hafa. Mijery tsara ny vaovao rehetra izay hanome ny rafitra. Vakio ny soso-kevitra Marina Nandinika ny mpampakatra ianao dia Mety hahita zavatra mahasoa anao.
Mikiry amin ny fiaviany
Atosiky ny zava-misy fa ny ray aman-dreny no tsy mamela anareo handeha ho any Brezila, tsy mahalala ny ao amin’ny olona ny fofombadiko. Mirary anao ho tsara vintana. Raha nilaza izy fa tsy misy ny fotoana ny ho any Brezila amin’ny na ahoana na ahoana, dia tsy mandeha. Izaho dia mipetraka any Brezila amin’ny taona fahatelo sy milaza fa ny lehilahy no tena tsy azo antoka, indrindra ny fanoherana ny vehivavy Breziliana, satria mino izy ireo fa isika dia mosarena, ary ny hafa tsy misy dikany. Na inona na inona no nilaza hoe: ny telo-polo taona sy ny fampianarana dia tena tara, mendrika ny olona dia efa ela no vita ny Oniversite sy ny asa, ary tsy ho avy ny tena tsy fisian’ny fanajana ho anareo. Izy tsy hanambady anao dia ianao raha tonga ao. Mba hanambady ao Brezila, dia mila lehibe taratasy avy amin’ny masoivoho, etc, ary izany dia lava sy sarotra ny lalana. Brezila no tena mihidy mba vahiny sy hahazo na inona na inona taratasy ity ny aretin’andoha eo amin’ny malagasy dia saika tsy misy iray miteny, ary portiogey mihevitra aho fa tsy fantatrao. ny fari-piainana eto dia ratsy noho ny any Brezila. izy dia tsy ny dite mba hiala eto. tsy manoro hevitra ny olona sy ny fanaratsiana. tsy ho ela ny olona, izay tsy dia misahirana tonga aminao, dia hampiseho aminao ny fomba ny gidro ary milaza ny olona rehetra izay misotro vodka lasopy ho an’ny sakafo Maraina eo amin’ny voly ny namana. izany dia tsara ny mijery ny any amin’ny firenena hafa. fantatrao ve fa ny any Brezila, ny ankamaroan’ny tanàna manana ny fanadiovana. izany dia feno olona tsy manan-kialofana. eto rehefa ny hariva no tsara kokoa eny an-dalambe mba tsy hamela ny iray fotsy hoditra vahiny izay handriny dia voasoratra fa tsy eo an-toerana.
Rehetra marina, mandra-hiditra ny toerana misy ny firenena ny fiainana andavanandro amin’ny rehetra ny mahay manavaka, izay tsy vakio ao amin’ny Internet, ary izay tsy eo amin’ny mpitarika hilaza ny mpizaha tany, izany dia tsy azo sary an-tsaina fa raha ny marina dia afaka miandry anao eto amin’ity firenena ity. Toy izany amin-kitsimpo misaotra anao noho ny vaovao, satria izay nilaza momba ny miaina ao Brezila. Izany dia tena hanampy anao mba zazavavy rehetra izay mikasa ny hiditra ao amin’ity firenena ity
Ny karajia amin'ny aterineto no toerana tsara indrindra ho anao mba hijery →